परदेशीले सोध्छन् : रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ जस्तो छ, दिदी प्लेन कहिले चल्छ ? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > परदेशीले सोध्छन् : रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ जस्तो छ, दिदी प्लेन कहिले चल्छ ?
admin May 22, 2020 May 22, 2020 जीवनशैली, प्रवास, रोचक, विचार	0
काम नै परदेशीको समस्या सुन्ने । तर कोरोना कहर सुरु भएपछि मैले असाध्यै पीडादायी समस्या सुनें । साउदीमा रहेका एक नेपालीको फोन रहेछ । पहिलेजस्तै सोधें, तपाईँलाई कस्तो समस्या परेको छ ? उनले भने, ‘कोरोनाको बेला मेरो त सद्दे आँखा देख्न नसक्ने भएँ ।’
उनको समस्याबारे थप सोधें । उनी भन्दै गए । फलाम तताउने कम्पनीमा काम गर्दा रहेछन् । फलामे तारले देब्रे आँखाान चोट लाग्यो । कम्पनीले अस्पताल त लग्यो। तर कोरोना महामारीका कारण सम्बन्धित विशेषज्ञ भेटिएनन् । आँखाको अप्रेशन भयो । तरिका मिलेन या के भयो । सही समयमा डाक्टर नभेटिंदा उनी आँखा देख्न नसक्ने भए ।
यस्तो समस्या सुनिरहँदा मन भारी हुन्छ । तर संसार कोरोनासँग आक्रान्त भइरहेका बेला परदेशमा ज्यान दाउमा राखेर खटिरहेकाहरुका धेरै समस्या ओझेल परेका छन् । उनलाई आफ्नो आँखाको ज्योति गुम्दा घर परिवार चाहिँ अँध्यारो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । भर्खर २९ वर्षको उमेर । आँखाले संसार देख्न छोड्यो । घरमा श्रीमती र छोरी उनकै आशमा सुखी संसारको कल्पना गरिरहेका छन् । उनीले भने, ‘म त कोरोना नलागे पनि यही पीरले मर्छु जस्तो छ ।’
भन्छन्, ‘तपाईँले भन्दा हुन्छ भने मेरो नाम पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिनुहोस् न, तपाईँले भनेको त सुन्लान्, सरकारलाई मेरो कुरा र समस्या सुनाइदिनुहोस् न ।’ उनले यसो भनिरहँदा लाग्छ, परदेशीले विभिन्न माध्यममार्फत रोइकराइ गरेको सरकारले नसुनेको होला र ! तर उनलाई चाँडै फर्कनु छ । चाँडै घर फर्कन पाए काठमाण्डौका अस्पतालमा आँखा उपचार गराउने उनको योजना छ । आँखा जोगाउन सक्थें कि भन्ने मनमा आश छ ।
यस्तो समस्या सुनिरहँदा मन भारी हुन्छ । तर संसार कोरोनासँग आक्रान्त भइरहेका बेला परदेशमा ज्यान दाउमा राखेर खटिरहेकाहरुका धेरै समस्या ओझेल परेका छन् । अहिले परदेशमा हुने धेरैका आँखाले नेपालबाट उनीहरुलाई लिन आउने जहाज हेर्न अतुर छन् । काम छैन । कमाइ छैन । कम्पनीले एक छाक खान दिएको छ । त्यो पनि ठिक छ । तर अहिले कोरोना महामारीका बेला परदेशीहरु कहाँ सुरक्षितसाथ बस्न पाएका छन् र ?
उनी सुनाउँछन्, कोरोनाजस्ते लक्षण देखिए उनीहरुलाई कम्पनीले क्याम्पभित्रै क्वारेण्टीनमा राख्ने रहेछ । तर जाँच भने नहुने रहेछ । सबैजना त्यसरी बस्नुपर्दा धेरैलाई मानसिक तनाब सुरु हुन थालेको छ । उनी सुनाउँछन्, ‘एउटा साथीको अवस्था अलि नाजुक छ, तर उपचार पाएको छैन, कतै हाम्रो पनि अवस्था त्यस्तै हुने त होइन, हामी डराइरहेका छौं ।’
उनी मात्र हैन, समस्या सुनाउन फोन गर्ने धेरैजना भन्छन्, ‘मरिन्छ कि के हो ? परिवारसँग यो जुनीमा भेट हुँदैन जस्तो छ, कोरोनाले भन्दा डरले मरिने भइयो ।’ सम्झाउन त म सम्झाउँछु उहाँहरुलाई । जति मैले बुझेको छु, त्यति उपाय र बाटाहरु पनि देखाउने कोशिस गर्छु । उनीहरुसँगको कुराकानी सकिएपछि सोच्छु, ‘आफ्नै माटोमा, आफ्नैको काखमा त हामी आत्तिएका छौं, सात समुद्रपारी उनीहरुलाई डर किन नलागोस् ।’
तर खै प्लेन कहिले चल्छ ? उनीहरुका पीडालाई म आफैं पनि शब्दमा उतार्ने कोशिस गर्छु । दिनमा मेरो मोवाइलमा धेरैको फोन आउँछ । उनीहरुमध्ये धेरैजसोको समस्या र गुनासो भने उस्तैउस्तै हुन्छ । भिसाको म्याद सकिएकोे, कम्पनीले एक्जिट परमिट दिएको अथवा घर फर्कनका लागि अनुमति दिएको । जुन अनुमति दिएपछि त्यहाँको कानुन अनुसार स्वदेश फर्कनु पर्छ ।
सुन्दर सपनाको भारी बोकी आफ्नो र परिवारको उज्जवल भविष्य कोर्न अर्थात हामीहरुको मिठो भाषामा भन्नुपर्दा परदेशी बनेकाहरु र उनीहरुको प्रतीक्षामा रहेका घरदेशीहरु तड्पिएर बाँच्न विवश छन् । आफ्नै पैसाले खान खर्च व्यर्होन परेको, आफूसँग पैसा सकिएर त्यही पनि खान नपाइने अवस्था आएको समस्या धेरैले सुनाउनुहुन्छ ।
कतिले कम्पनीले नै कोठामा बस्न दिएको र योभन्दा बढी गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल फर्कनको लागि भनिरहेको भन्ने गुनासो पनि गर्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हुनेहरु सोध्नुहुन्छ, उडान कहिले खुल्ला ? हामी कहिले फर्कन पाउँछौं ? सरकारले नै निर्णय गर्न नसकेको विषयमा म के जवाफ दिउँ । थाहा छैन, निश्चित छैन भन्न पनि मन मान्दैन । सरकारी नियम र यहाँको परिस्थितिका बारेमा बताउँछु। आशा लिएर फोन गर्ने उनीहरु कोही त निराश पनि हुन्छन् ।
सुन्दर सपनाको भारी बोकी आफ्नो र परिवारको उज्जवल भविष्य कोर्न अर्थात हामीहरुको मिठो भाषामा भन्नुपर्दा परदेशी बनेकाहरु र उनीहरुको प्रतीक्षामा रहेका घरदेशीहरु तड्पिएर बाँच्न विवश छन् । आज हरेक नेपाली घरको एउटा मन परदेशमा रहेका आफन्तसँग उतै छ । स्वदेशमा समेत कोरोनाको उस्तै कहर छ । उता परदेशिएकाहरु लाश पनि परदेशी भूमिमा नै विलीन हुने भयो भन्दै भगवान भरोसामा बस्न बाध्य छन् ।
यो परिस्थितिलाई पनि हामी जित्नेछौं । परदेशीले पनि जित्नुहुनेछ । आशा गरौं परदेशी र घरबासीको भेट पनि छिट्टै हुनेछ । खानाको समस्या आएलगत्तै हाम्रा सम्बन्धित देशमा रहेका प्रतिनिधिमार्फत समन्वय गरी व्यवस्थापन र सहयोग पनि गर्छाैं । अलपत्र पर्नुभएकालाई सुरक्षित आवासगृहमा बस्ने प्रबन्ध पनि मिलाउँछौं । यस्ता कार्यमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले समेत महत्वपूर्ण सहयोग र समन्वय भैरहेको छ । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँगको सहकार्यसमेत महत्वपूर्ण छ ।
परिस्थिति नै यस्तो छ कि पहिलोजस्तो जहाज खुल्नासाथ आउने र घर गइहाल्ने अवस्था कहिले बन्ला यकिन भन्न सकिन्न । तर सकारात्मक सोचौं । हामीले जीवनमा अनेक परिस्थिति भोग्यौं । यो परिस्थितिलाई पनि हामी जित्नेछौं । परदेशीले पनि जित्नुहुनेछ । आशा गरौं परदेशी र घरबासीको भेट पनि छिट्टै हुनेछ । उज्यालोअनलाइनबाट ।